I-UIP2000hdT - Ama-2000 Watts Amandla we-Ultrasonicator Wokulawula Okugcwele Kwezinqubo - I-Hielscher Ultrasound Technology
I-UIP2000hdT – I-2000 Watts Ultrasonicator Yezimboni Zezimboni ze-Full Process Control
I-digital digital ultrasonicator i-UIP2000hdT (20kHz, 2000W) iyinkimbinkimbi enamandla ye-ultrasound yokunakekelwa kwamakhemikhali ebhentshini eliphezulu kanye nezilinganiso zezimboni. Izinhlelo zokusebenza zihlanganisa i-homogenization, emulsification, Ukuhlakazeka & i-particle kahle, lysis & Ukukhipha, ukuqedwa noma Ukusabela kwe-Sonochemical njenge Sono-Synthesis futhi Sono-Catalysis. Umbukiso wokuthinta umbala, ukulawula okukude kwesiphequluli, ukurekhoda kwedatha ngokuzenzekelayo, ukuhlanganiswa kwe-SD / USB ComboCard nokushisa okufakelwayo kanye nezinzwa zomshoshaphansi kuvumela ukulawulwa kwenqubo okuqondile nokusebenza kwenduduzo.
Amandla Aphakeme Nokulawula Okugcwele Process
Sonication enamandla iyisisombululo senqubo yezicelo eziningi zokufakelwa kwamanzi, njengokuthi Emulsifying, Ukuhlakazeka, Ukukhokha noma ukuqedwa. I-UIP2000hdT inikeza amagagasi amakhulu e-ultrasound ukufeza imisebenzi edingayo ngaphandle kwezinkinga. Ukuqinisekisa ukuvumelana inqubo yekhwalithi, hhayi kuphela amandla okuthunyelwa kubalulekile, i ukulawula nokuqapha zonke izinqubo ezibalulekile zenqubo iyisihluthulelo. Isizukulwane esisha se-hdT ultrasonicators senza opharetha ukuba aqhube umshini we-ultrasonic nge-touch display noma isiphequluli esikude sokulawula. Yonke imigomo yenqubo efanele – ezifana amplitude, isikhathi sonication, izinga lokushisa kanye nokucindezela – ziqoshwa ngokuzenzakalelayo futhi zigcinwe njengefayela le-CSV kwi-SD / USB ComboCard edidiyelwe.
Ngaleyo ndlela, i-UIP2000hdT entsha inikeza amandla afanayo e-ultrasound njengowandulela I-UIP2000hd, kodwa ihamba phambili ngobubanzi obuningi bezimpawu ezengeziwe, okwenza inqubo ye-ultrasound ibe yinto engcono kakhulu yomsebenzisi. Kusukela ekubukweni kokusebenza, ukulawulwa okuqondile kwazo zonke izinqubo zemishini ye-ultrasonic yimisebenzi esemqoka ephelele.
I-watts ka-2000 i-ultrasonicator enamandla
onokwethenjelwa kwezinyathelo ezinzima zokusebenza sonication
Ukusebenza komhlaka 24/7
isibonisi sokuthinta umbala
upheqa ukulawula okude
ukuqoshwa kwedatha okuzenzakalelayo kwamandla, ubukhulu bemvelo, isikhathi sokunakekela ingane, izinga lokushisa, ukucindezela
ihlanganiswe SD / USB ComboCard
inzwa yokushisa eguquguqukayo
inzwa yokucindezela ixhuma (okukhethwa kukho kuyatholakala)
akukho ukufakwa kwesofthiwe
ukuvama kokuvama okuzenzakalelayo
Umbala ogcwele wokuthinta isikrini
Ukuthuthukiswa okukhulu kusukela ekubukweni kokusebenza kuyisikrini sokuthinta ezinemibala. Isikrini esithintekayo nesithintekayo senza kube lula ukusingatha, kanti ukulungiselelwa okunembile kwemingcele yokusebenza kanye nokuboniswa kokusethwa kwamandla we-ultrasound kuqinisekisiwe futhi kuhlangene nenduduzo ephezulu yomqhubi. Imenyu yokulawula yedijithali inembile ukuyisebenzisa njenganciphise kuzilungiselelo ezisemqoka. Isimo se-amplitude / amandla kanye nemodi ye-pulse ingashintshwa yi-slider touch-slider (ene-1%, 5% noma i-10% ye-snap). Umsebenzisi uthatha isinqumo, uma ekhetha ukuboniswa kwe-amplitude namandla njengamagrafu ebrabhu enemibala noma ukumelwa kwamanani. Ukuboniswa kungashintshwa kusuka kwimodi yokubuka evamile kuya kwimodi yokubonisa NUMBER ye-BIG, ebonakala ngokuphambene okukhulu kanye nosayizi omkhulu wefonti wokubonakala okuthuthukisiwe.
I-Remote Control Control
I-UIP2000hdT ingalawulwa ngokusebenzisa noma yisiphi isiphequluli esivamile, njenge-Internet Explorer, Safari, Firefox, Mozilla, i-mobile IE / Safari usebenzisa i-interface entsha ye-LAN web. Ukuxhumeka kwe-LAN iyi-plug-n-play elula yokusetha futhi akudingi ukufakwa kwesofthiwe. Idivayisi ye-ultrasonic isebenza njenge-DHCP iseva / iklayenti kanye nezicelo noma ibeka i-IP ngokuzenzakalelayo. Idivayisi ingaqhutshwa ngokuqondile kwi-PC / MAC noma isebenzise inkinobho noma router. Ukusebenzisa i-router engenayo i-wireless ngaphambili, idivayisi ingalawulwa kusuka kuma-Smartphones amaningi noma kumakhompyutha we-tablet, isib. I-Apple iPad. Ukusebenzisa ukuthunyelwa kwe-port ye-router exhunywe, ungalawula i-UIP2000hdT yakho nge-intanethi kusuka kunoma iyiphi indawo emhlabeni – i-smart-phone yakho noma i-tablet ibe yisilawuli kude.
Inethiwekhi eyakhelwe ngaphakathi
Esinye isici esihlakaniphile se-UIP2000hdT ukusebenza nokulawula nge-LAN (inethiwekhi yendawo yendawo, bheka ibhokisi elilungile) elenza kube lula ukusebenza futhi ivumela ukucubungula okuphezulu ukuguquguquka. Yonke imininingwane yenqubo ye-sonication ibhalwe ekhadini le-SD / le-USB, ngokuzenzakalelayo. Inzwa ehlulwayo ibeka izinga lokushisa unomphela kodwa i-sensor ye-pressure sensor iyatholakala.
Njengawo wonke amadivayisi we-Hielscher ultrasonic, i-UIP2000hdT ifika nge-tuning ehlakaniphile yokuvamisa imishini. Uma idivayisi ishintshiwe, i-generator izobona imvamisa yokusebenza efanele. Kuzobe sekushayela idivayisi kule mvamisa. Lokho kuthuthukisa ukusebenza kahle kwamandla kagesi nokwethenjwa kwamadivaysi ethu e-ultrasonic. Konke okudingeka ukwenze, ukushintsha uhlelo. I-generator izokwenza ukuhanjiswa kwevama ngokuzenzekelayo ngephiciti yesibili.
Iyunithi Yomsebenzi Osebenzayo Ezingxenyeni Eziningi
I-UIP2000hdT yindlela eqinile futhi enokwethenjelwa yazo zonke izinqubo ze-ultrasonic liquid. Izicelo ezibalulekile zeprosesa ye-ultrasonic i-UIP2000hdT yi-breakage (ukunciphisa usayizi wezinhlayiyana), i-deaggomerom & ukuhlakazeka of materials nano, the Ukusebenza wezinhlayiya ze-nano, emulsification, ukukhiqizwa kwama-biofuels (isb Biodiesel, I-Bioethanol), ukubunjwa kwe I-Paint & ezinengilazi, kanye nezicelo ezahlukene ze-sono-chemical (isb Sono-Catalysis, isigaba sokudluliswa kwesigaba, Ukwehliswa, imizila ye-sol-gel).
Ngamandla we-2000W we-ultrasonic, i-UIP2000hdT ilawula kalula izinhlelo zokusebenza ku-pilot nesilinganiso esikhulu. Sonotrodes efana ne-the cascatrode ™ ukuhlinzeka ngamandla okudingekayo ekwelapheni kwe-ultrasonic ketshezi. Amaseli egeleza ahambisanayo anikezwa ukuqhutshwa okuqhubekayo. Ukuvikelwa kwemisindo ye-sound ukugcwalisa uhlelo lwe-ultrasonic olusekelwe ku-UIP2000hdT. Isithombe esingenhla, sibonisa uhlelo lokuhlukanisa lwe-24xUIP2000. Amandla ahlangene we-48kW asetshenziselwa ukucubungulwa kwe-approx. 6m³ / hr.
I-UIP2000hdT – i-digital digital 2kW ultrasonicator yezimboni for control precision control
Uma une-predecessor njengo-UIP500hd, UIP1000hd, UIP1500hd, UIP2000hd, ungathuthukisa idivayisi yakho ku-hdt version ye-digital. Chofoza lapha ukuze ufunde kabanzi mayelana nokuthuthukiswa kusuka ku-hd kuya ku-hdT version!
I-generator ye-Ultrasonic ene-touch-screen enemibala
I-ultrasonicators yezimboni zedijithali ihlanganisa ukulawula isiphequluli esihlakaniphile sokusebenza okusetshenzisiwe nokucubungula.
Uhlu olubanzi lwezinto eziningi Izesekeli, njenge-sonotrodes, ama-boosters kanye namaseli okugeleza atholakala ku-UIP2000hdT. Ngokuhlanganiswa ne-sonotrode kanye ne-stand, ungakwazi ukufaka amasampula ku-batch ukuze uvivinye noma uhlakulele amafomu ahlukahlukene weketshezi ngokuphendula kwabo ku-sonication.
Ukuze kusetshenziswe ama-batches amakhulu kunama-5 amalitha, ngokuvamile siyancoma ukuthi sebenzisa i-reactor cell cell (i-flow mode) ukuze uthole ikhwalithi yokucubungula kangcono. Uma isetshenziswe nge-flow cell ungasebenzisa amasampula amakhulu ukuphindaphinda ukusetha ukuhlanganiswa phakathi kwamapharamitha, njenge-amplitude, ingcindezi kanye nokwakhiwa kwamanzi, kanye nemiphumela yokusebenza kanye nokusebenza kahle. Uma isetshenziselwa ukunikezwa kwezidakamizwa kumodi yokugeleza, i-UIP2000hdT ingajwayelekile phakathi kuka-1.0 no-8.0L / iminithi (Izinga langempela lizoxhomekeka enkambisweni yakho). Njengoba i-UIP2000hdT ikhona ibanga eligcwele lezimboni, ingaqhutshwa Amahora angu-24 ngosuku (24h / 7d). I-UIP2000hdT ingakwazi ukucubungula nge-approx. 2 kuya ku-10m³ ngosuku. Ukuze uthole ukukhiqizwa okuphakeme okukhiqizayo, sincoma ukusebenzisa ama-multiple units noma enye yamadivayisi amakhulu amakhulu e-ultrasonic:
I-UIP4000 (4000W, 20kHz)
I-Industrial Grade kanye nokuphumelela okuvelele
I-UIP2000hdT yenzelwe futhi eyakhelwe ukukhiqizwa kwezohwebo. Le prosesa ye-ultrasonic idinga isondlo esincane, kulula ukusetha futhi kulula ukuhlanza nokuhlanza.
Naphezu kwamandla amakhulu eprosesa ye-ultrasonic UIP2000hdT (2000 watts, 20kHz), le divayisi ye-ultrasonic ayidingi ukupholisa okungeziwe ngamanzi noma umoya ocindezelweyo. Idivayisi ingasebenza ngokuqhubekayo emoyeni, futhi. Umklamo oqinile we-transducer, owenziwe nge-stainless steel and titanium, wenza ukusetshenziswa ngaphansi kwezimo ezimbi kakhulu zothuli, ukungcola, amazinga okushisa aphezulu kanye nomswakama.
Njengabo bonke abacubungula be-ultrasonic yezimboni, i-UIP2000hdT ine-kakhulu ukusebenza kahle ekuguqulweni kwamandla kagesi abe oscillation mechanical of the sonotrode. Lokhu kusho, lokho amandla engeziwe idluliselwa emanzini, okuholela ku-a sonication kangcono. Ukusebenza kahle kwamandla we-UIP2000hdT kufinyelele. 80-90% kusuka ku-plug yamandla ku-liquid (chofoza esithombeni ngenhla ukuze ukwandise ishadi).
Ukulawula okuphelele kwe-Amplitude nokusebenza okuphezulu
Ukuphakama kwe-UIP2000hdT kulawulwa ngekhompiyutha, ukuze ubukhulu bemisindo ye-ultrasonic engxenyeni ye-sonotrode ihlale ngaphansi kwazo zonke izimo zomthwalo. Ungashintsha ukuphakama kusuka ku-20 ukuya ku-100% ku-generator nakwezinye izigaba ngokusebenzisa izinkomba ezihlukahlukene ze-booster. I-amplitude ekhethiwe ibanjwe njalo, ngenkathi iveza noma iyiphi into kunoma yikuphi ukucindezela. Lesi sici sikunikeza ukulawula okugcwele phezu kwepharamitha ye-sonication ebaluleke kakhulu: Ukulinganisa.
Uma ungathanda ukuhlola i-UIP2000hdT ngezinhloso zakho, ungaqhuba izivivinyo zenqubo kwelebhu yethu yenqubo. Uhlu lwezesekeli ezijwayelekile lungatholakala ngezansi. Zonke izinto zithwalwa ngokujwayelekile esitokweni, ngakho-ke isikhathi sokulethwa siseduze kakhulu. Uyacelwa ukuthi usebenzise ifomu elingezansi, ukucela isiphakamiso se-UIP2000hdT enezesekeli ezifanelekileyo. Senza izesekeli ezenziwe ngezifiso nathi. Lokhu kufaka phakathi ama-sonotrodes akhethekile noma amaseli wokugeleza. Zizwe ukhululekile ukuchaza izidingo zakho ezithile kwinkambu yamazwana ngendlela engezansi.
I-Industrial Ultrasonic Processor UIP2000hdT
Ama-watts angu-2000 ehlanganisa i-transducer ye-ultrasonic ne-generator, imvamisa ye-ultrasonic engu-20kHz, uhlelo lwe-frequency yokugudluza imvamisa, i-amplitude engu-25 micron, i-amplitude eguquguqukayo kusuka ku-20 kuya ku-100%, ukusebenza okumile okuvikelwe, i-transducer ibanga le-IP64, ukulawulwa kwe-digital, ne-touch-screen screen (Izinsuku ezingu-0.1 kuya kwezinsuku ezingu-99), ukuvalwa lapho ukufakelwa kwamandla okugcina kufinyelela: Ws, Wh, kWh; ukulinganisa okuzenzakalelayo uma kunesidingo: ukuzimisela kwamandla angenalutho okuthembekile ekuboniseni amandla okufaka amandla, ukurekhoda kwedatha: ukuphakama kwedatha, amandla, isikhathi, izinga lokushisa kwi-SD / USB ComboCard yangaphakathi (1GB), ukubonisa nokulawula okukude nge-browser noma i-MAC ngaphandle ukufakwa kwesofthiwe, ne-sensor yokushisa, izinga lokushisa: ° C, ° F (-50 ° C bis 200 ° C), ukuqapha izinga lokushisa: ukushintshashintsha okuguquguqukayo / amaphuzu (-50 ° C - 200 ° C), i-3m transducer cable kuya generator, ngamathuluzi okhulayo, titanium phondo ngentambo female M14x1
115 Volts, AC, isigaba esisodwa, 24A, 50-60Hz
I-230 Volts, AC, isigaba esisodwa, 12A, 50-60Hz
ukuze usebenzise nge flange RFLA100, for flow flow cell noma operation batch, titanium, tip ububanzi 18mm, intambo yesilisa M14x1, cishe. ubude obuyi-125mm (w / o intambo), isilinganiso se-amplitude isilinganiso. 1: 3.5
ukuze usebenzise nge flange RFLA100, for flow flow cell noma operation batch, titanium, tip ububanzi 22mm, intambo yesilisa M14x1, cishe. ubude obuyi-125mm (w / o intambo), isilinganiso se-amplitude isilinganiso. 1: 2.4
ukuze usebenzise nge flange RFLA100, for flow flow cell noma operation batch, titanium, tip ububanzi 34mm, intambo yesilisa M14x1, cishe. ubude obuyi-125mm (w / o intambo), isilinganiso se-amplitude isilinganiso. 1: 1.0
ukuze usebenzise nge flange RFLA100, for flow flow cell noma operation batch, titanium, tip ububanzi 40mm, intambo yesilisa M14x1, cishe. ubude obuyi-125mm (w / o intambo), isilinganiso se-amplitude isilinganiso. 1: 0.7
for operation batch, titanium, tip ubukhulu 50mm, intambo yesilisa M14x1, cishe. ubude obuyi-125mm (w / o intambo), isilinganiso se-amplitude isilinganiso. 1: 0.5
nge-oscillation-ukusika imfucu ye-stainless steel, for flow cell noma ukusebenza kwe-batch, titanium, tip ububanzi 50mm, intambo yesilisa M14x1, cishe. ubude obuyi-125mm (w / o intambo), isilinganiso se-amplitude isilinganiso. 1: 0.5
nge-seal ye-O-ring (2xNBR) ku-sonotrode, ububanzi be-100mm, insimbi engenalutho, ukuze isetshenziswe nge-sonotrodes BS4d18, BS4d22, BS4d34 noma i-BS4d40, ne-O-Ring (NBR) yokuqhubekela phambili ukugeleza amaseli FC100L1-1S noma FC100L1K-1S
I-Flow Cell FC100L1-1S
i-reactor ye-stainless steel ehlulekayo, max. imigoqo engu-10, ye-UIP500hd eya ku-UIP2000hd ngokuhambisana ne-sonotrode flange nokuma kwe-ST2, i-NBR izindandatho, izixhumi ze-tube (1/2 intshi) ne-clip
I-Flow Cell FC100L1K-1S
i-reactor ensimbi engenasici ngejacket yokupholisa, max. imigoqo engu-10, ye-UIP500hdT eya ku-UIP2000hdT kuhlanganiswe ne-sonotrode flange nokuma kwe-ST2, i-NBR izindandatho, izixhumi ze-tube (u-1/2 intshi yamanzi, ukupholisa 1/4 intshi) ngesiqeshana
I-Flow Cell Insert22
for flow flow cells FC100L1-1S noma FC100L1K-1S, ukunciphisa ivolumu yesiguquko, ukusetshenziswa nge sonotrode BS4d18 (F) noma BS4d22 (F), NBR izindandatho, insimbi engagqwali
I-Flow Cell Insert34
Faka 34, ngamaseli okugeleza FC100L1-1S noma i-FC100L1K-1S, ngokunciphisa ivolumu yesiguquko, ukuze kusetshenziswe nge-sonotrode BS4d18 (F), BS4d22 (F) noma BS4d34 (F), i-NBR O-izindandatho, insimbi engagqwali
ukwenyuka komshini (noma ukunciphisa) kwe-amplitude ku-sonotrode, ubukhulu isilinganiso 1: 1.2 (noma i-1: 0.83), i-titanium, izintambo zesifazane M14x1, ukuze zisebenzise nge-titanium thread bolts (TiM14x1)
ukwenyuka komshini (noma ukunciphisa) kwe-amplitude ku-sonotrode, ubukhulu isilinganiso 1: 1.4 (noma 1: 0.71), titanium, izintambo zamakhosikazi ze-M14x1, ukuze zisebenzise nge-titanium thread bolts (TiM14x1)
ukwenyuka komshini (noma ukunciphisa) kwe-amplitude ku-sonotrode, ubukhulu isilinganiso 1: 1.8 (noma i-1: 0.56), i-titanium, izintambo zesifazane M14x1, ukuze zisetshenziswe nge-titanium thread bolts (TiM14x1)
ukwenyuka komshini (noma ukunciphisa) kwe-amplitude ku-sonotrode, ubukhulu isilinganiso 1: 2.2 (noma i-1: 0.45), i-titanium, izintambo zesifazane M14x1, ukuze zisetshenziswe nge-titanium thread bolts (TiM14x1)
insimbi engenalutho ene-electro-polished, edingekayo kumaseli okugeleza FC100L1-1S noma FC100L1K-1S, ukuphakama okuguquguqukayo 370 kuya ku-590mm, ukuqoqa itreyi
ngokuba ukuma okulula kwama-sampula ngaphansi kwe-probes ye-ultrasonic ukulawula ukujula ukujula, insimbi engagqwali, ukunyathelisa 100x100mm, ukuphakama okuguquguqukayo: 50 kuya 125mm
I-Sound Protection Box SPB2
I-UIP500hdT eya ku-UIP2000hdT, isb ukuze isetshenziswe nge-stand ST2 namaseli okugeleza FC100L1-1S noma FC100L1K-1S
UIP500hdT – Ukucubungulwa Kwezimboni Ngezilinganiso Ezincane
I-UIP1000hdT – I-homogenizer enamandla futhi ehlukahlukene
Ama-Ultrasonic Processors Amasha: I-hdT series
Amadivaysi e-ultrasonic avame ukubizwa ngokuthi i-sonicator yesondlo, i-homogenizer ye-ultrasound, i-lyser ye-Sonic, i-ultrasound ukuphazamisa, i-grinder ye-ultrasonic, i-sono-ruptor, i-sonifier, i-sonic dismembrator, i-cell disrupter, i-ultrasonic disperser noma i-dissolver. Amagama ahlukene avela ezinhlobonhlobo zokusebenza ezingagcwaliseka nge-sonication.
I-Ultrasonic Cavitation enamandla e-Hielscher Cascatrode